Eco တာအမျိုးသမီးစာမျက်နှာ 2
ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်လွန်ခဲ့တဲ့စိတ်အနှောင်မှအအေးမိ၏ကုသမှုထဲမှာအသုံးပြုတဲ့လူကြိုက်အများဆုံး tool ကိုသာမန်ရှူရှိုက်မိခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးသည်အနာရောဂါစွဲသောလူအပြည့်အဝရှူရှိုက်နိုင်ဘူးအဘယျသို့ကနေညမှာနိုးထမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ခံတွင်းကိုအားလုံးခန်းခြောက်လေ၏။ ဒါပေမယ့်ဆေးဝါးများ၏စင်ပေါ်အပေါ်ကိုအလွယ်တကူသွေးကြောကျဉ်း၏ရန်ကြောင့်နှာခေါင်း mucosa အပေါ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းဖယ်ရှားပေးကြောင်းမူးယစ်ထင်ရှား။ , ထို viscous အရည်မတူဘဲ, လေထုအလွယ်တကူအဲယားဝေးသို့ဖြတ်သန်းပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဂုဏ်သတ္တိများကလေးငယ်များ Naphthyzinum ပင်မွေးကင်းစကလေး၏ကုသမှုများအတွက်သုံးစွဲဖို့စတင်ခဲ့ကြောင်းမျက်နှာသာကြသည်။ အမှန်မှာထိုမူးယစ်ပြဿနာကိုဖယ်ထုတ်ပစ်။ ဒါပေမယ့်အကြောင်းရင်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါအားနည်းချက် မ naftizinu ကုသရန်ဖို့အသုံးပြုလာဆောင်မှာယူဆတစ်စုံတစ်ဦးကိုချမ်းအေးထက်ပိုအဘို့မှတ်ပြင်ဆင်မှုနှင့် ပတ်သက်.
Tsibulyaniki - တစ်စာရွက်
မ Tsibulyaniki - အချဉ်မုန့်သို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းအတူ borscht ကျွေးခြင်းကိုခံရနိုငျတဲ့ယူကရိန်းရေစာ။ ကြက်သွန်နီ, ကြက်ဥနှင့်မုန့်ညက်မှသူတို့ကို ပြင်ဆင်.
သငျသညျအီတလီနိုင်ငံ, ရောမတို့၏မြို့ကိုသွားရောက်ပြီးကြလျှင် ဖြစ်ကောင်းစျေးဝယ်စရာဖြစ်လိမ့်မည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသင်ခန်းစာတွေကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးတယောက်သည်, ယခုအခါအီတလီဒီဇိုင်နာများအများအပြားဖက်ရှင်ရှိုးတှငျ "သေံ set" ဖြစ်ပါတယ်ကွောငျ့ - ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာဖက်ရှင်ရောမမြို့အတွက်စျေးဝယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုထားကြပါပြီ။ ထိုကဲ့သို့သော Fendi, Gucci, Valentino, Prada ်စားဆင်ယင်ဧကရာဇ်, သမ္မတ, ပြပွဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြယ်နဲ့ကျော်ကြားအားကစားသမားအဖြစ်အီတလီတံဆိပ်များ။ ဘယ်မှာရောမမြို့ရှိ Shopping?
ဖက်ရှင် 2014 ခုနှစ်အတွက်တင်သော
ရာသီသစ်မှာတော့နေဆဲဖက်ရှင်ဣတ္နှင့်ရင်ခုန်စရာပုံစံဖြစ်ကြ၏။ လူကြိုက်များတိကျခိုင်မာစွာနှင့်ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ဆံပင်အနည်းငယ် tousled ဆံပင်ကောက်ကောက်သို့မဟုတ်ရုံဖန်တီးမှုရှုပ်ထွေး။ ယေဘုယျအားဖြင့်, အမြင့်ဆုံးသဘာဝနှင့်လည်ပင်းကိုဆဆံပင်တစ်နည်းနည်း 2014 နီးကပ် stacking ။ ရှည်သောဆံပင်, 2014 Styling မ stylist လွန်းပညာရှိရာမကိုအကြံပေးများနှင့်တတ်နိုင်သမျှသဘာဝ form မှာသင့်ရဲ့ဆံပင်ထားခဲ့ပါ။ ပထမဦးဆုံးအ stylist ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ် Victoria Secret ရဲ့၏လုပျငနျးမှအာရုံစိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်ပေါ့ဆမှုတစ်ခုထိတွေ့နှင့်အတူသာယာလှပတဲ့ကြာမြင့်စွာစီးဆင်းနေသောဆံပင်ကအရမ်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုအခါဆံပင်ရဲ့အရှည်ရှည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်မူတည်နှင့်ပိုပြီးဂရုတစိုက်သင်သည်သင်၏ဆံပင်ကြီးထွားမည်ဟုဣတ္နှင့်စတိုင်ကြည့်ရှုသူတို့အထဲကမှုတ်လိမ့်မည်။ 2014 ခုနှစ်တွင်နေ့စွဲပုံစံမှရိုးရိုးတစ်ခုချင်းစီမျှင်စွန်းပေါ်တွင်ဆံပင်ခွေများနှင့်သူတို့ရှုပ်ထွေးမဟုတ် secure ။ pin ကို-up ကရဲ့ style အတွက် မ boxes 2014 ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်စင်ပေါ်ကိုအပေါ်ဖြစ်ကြ၏။ ဒီမှာသင်တန်း, ကျနော်တို့ရလဒ်ရဖို့အချို့အလုပ်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကြည့်ရှုရှိသည်။ တစ် Retro စတိုင်, ကြော့ကြည့်ရှုစီစဉ်ဆံပင်, ။ ရိုးရှင်းတဲ့ option ကို - အခွံသို့မဟုတ်ထုပ်အမျိုးမျိုး။ တီးဝိုင်းများ၏အမြစ်များမှာရုံအနည်းငယ်ဓာတ်လှေကား, ကြီးစွန်းတိုင်အောင်ခွေအပေါင်းတို့နှင့်တကွစိတ်ကူးလှိုင်းတံပိုးတင်းကျပ်။ ပြီးတော့တစ်ဦးဂရုတစိုက်ရှိသမျှတို့ကိုဖြောင့်ရှင်းလင်းသပ်ရပ်ဆံပင်ကောက်ကောက်ပါစေ, သို့မဟုတ်ပေါ့ဆမှု၏အလငျး၌ထားခဲ့ပါ။ color ကိုလှိုင်းတံပိုးကိုလက်ခံရန်နှင့်တစ်ဦးထက်ပို understeer စတိုင်ကြိုက်တတ်တဲ့ပါဘူးတဲ့သူတွေရန်, stylist Iron နှင့်အတူ 2014 ခုနှစ်တွင်တပ်ဆင်ခကိုဆက်ကပ်။ တိုက်ရိုက်နှင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်စီစဉျပေးဆံပင်, အလယ်၌ကွဲအနည်းငယ်တဖက်သတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပေါက်ကွဲသံကြီးနှင့်အတူအရာအားလုံးကိုကိုယ်အဘို့တစ်ကြိုးစားရကျိုးနပ်သည်။ boxes 2014 ခုနှစ်, အလတ်စားဆံပင် အလတ်စားအရှည်ဆံပင်ပင်ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှုပိုင်ရှင်တွေလုပ်ပါ။ ထိုဖက်ရှင်ဖီးများထဲတွင်တော်တော်များများကားတွေအများကြီးတန်းစီအတွက် options ဖြစ်ကြ၏။ နာမည်ကြီးအဆင့်နှင့်ယနေ့အချိန်တွင်၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကိုပွင့်ကိုမပေးပါဘူး။ ရာသီ 2014 ခုနှစ်ဆံပင်ညှပ်နှင့်အတူဖက်ရှင်ပုံစံကွဲပြားခြားနားနေသောခေါင်းစဉ်: ချောချောမွေ့မွေ့ elongated အ strands ဿုံကိုဆံပင်ညှပ်၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာမူရင်းပန်းချီကားကိုအလေးပေး, ကြီးစွန်းမှာအပြင်အကြံပေးချက်များသို့မဟုတ်ဆံပင်ကောက်ကောက်လိမ် ။ 2014 ခုနှစ်မှာတစ်စတုရန်းဖြတ်တောက်ဘို့ ဖက်ရှင်ပုံစံကအရမ်းဣတ္နှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖြစ်ကြ၏။ Part တတ်နိုင်သမျှအနိမ့်သည် ဖြစ်.
2013 ခုနှစ်တွင်ရုရှားနိုင်ငံရှိ Juvenile တရားမျှတမှု
ရုရှားနိုင်ငံရှိ မ Juvenile တရားမျှတမှု - လက်ရှိ 2013 ခုနှစ်ကဖွဲ့စည်းအရွယ်မရောက်သေးသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ရည်ရွယ်သည့်မူဝါဒ, ဥရောပနှင့်အဆုံးကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောတရားဝင်လက်ခံအတည်ပြုသည်မဟုတ်။ အများစုကစီမံကိန်းများကိုပြီးသားကြောင့်နေသူများကဖန်တီး, ဒါပေမယ့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်တွင်ရှိနေကြပြီ။ ပေမယ့်, ဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အချို့ဒေသများအတွက်, ဒီစနစ်၏အခြေခံသဘောတရားများအချို့ကိုဖြစ်ဖို့ရာအရပျဖြစ်ကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်သည်။ အမေရိက, တောင်အာဖရိက, အိန္ဒိယနှင့်အများအပြားဥရောပနိုင်ငံများတွင်လူနည်းစုအပေါ်သီးသန့်အထူးပြု, တရားစီရင်ရေး functioning နေကြသည်ကိုလည်းလူမှုရေးအသိုင်းအဝုိင်း၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက်တက်ကြွစွာပါဖြစ်ကြ၏။ တစ်ဦးကိုရုရှားလူငယ်စနစ်, အရွယ်မရောက်သေးသူကိုရည်မှတ်တရားစီရင်ရေးဥပဒေစနစ် defining ဥပဒေများကိုကန့်သတ်အစုံအတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ကျော်နှင့်ဤနေ့ကမှနိုင်ငံရေးသမားများ, စိတ်ပညာရှင်, လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် full-စုံတဲ့ရုရှားလူငယ်တရားမျှတမှု၏နိဒါန်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ရှိအခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအကြားဆွေးနွေးငြင်းခုံအပူမဖျက်ဆီးဘဲမနေနိုင်ကြပါဘူး။ ထိုအခါအငြင်းပွားမှု၏အဓိကဘာသာရပ်အများဆုံးလူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပြည်ခိုင်ဖြိုး၏သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိပါတယ်။ လူငယ်တရားမျှတမှု "ကို" Arguments လူငယ်တရားမျှတမှုစနစ်၏အဆိုပါနောက်ခံလူများအပြင်ကလေးငယ်များဆန့်ကျင်ပြစ်မှုပင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအပါအဝင်, တရားမျှတမှု juvenile ရာဒီစနစ်ကအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာဥရောပ၌ရှိကျယ်ပြန့်လူမှုရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာအလေ့အကျင့်လက်ခံရရှိခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုအပေါ်အလေးပေး, သက်ငယ်ပြစ်မှုများ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပါ လူငယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်ရာဇဝတ်မှု၏သားကောင်များ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ ဥရောပနိုင်ငံများတွင်၏အတွေ့အကြုံမှရည်ညွှန်းပြီး, က (လူငယ်တရားမျှတမှုကိုကူညီထောက်ပံ့) လူငယ်တရားမျှတမှုကိုသီးခြားအခန်းနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားပုဂ္ဂိုလ်များကလူငယ်တွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရမှ, ဒါပေမယ့်လည်းလူငယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုသာပါဝင်သည်သတိပြုရကျိုးနပ်သည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူပြဿနာကိုလူ့အဖှဲ့အစညျးအတှကျနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝိညာဏ်၌နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကိုကူညီဖြစ်နိုင်သည်ရာဇဝတ်သား၏အမည်းစက်ကနေသူ့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်အားလုံးရာဇဝတ်သားအဖြစ်ဆက်ဆံပါလိမ့်မည်လျှင်ပြီးနောက်ရှိသမျှသည်ဥပဒေကိုလိုက်နာရွယ်တူနှင့်အတူတစ်ဘုံဘာသာစကားရှာဖွေတာ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုသူတိုင်းနီးပါးမတည်မနေပါဘူး။ ထိုမင်းသည်ဖြစ်ကောင်းလမ်းပေါ် asocial သည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ လူငယ်တရားမျှတမှု "ဆန့်ကျင်" အဆိုပါဆင်ခြေ သို့သော်, လူငယ်စနစ်၏ပြိုင်ဘက်သည်၎င်း၏မိတ်ဆက်စကားဆန့်ကျင်မနည်းအငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သူတို့ဟာရုရှားလူငယ်တရားမျှတမှုစနစ်၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအံ့ဆဲဆဲကမိသားစုအသက်တာ၌နိုင်ငံပိုင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအန္တရာယ်, အဖြစ်တိုးမြှင့်လူမှုရေးအေဂျင်စီများသငျ့လျြောမှကျယ်ပြန့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာလွှဲအပ်ဗျူရိုကရေစီမင်းထက်မှုကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အကြောင်းရင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်စေမည်ဟူသောအချက်ကိုအပေါ်အလေးပေးပြောကြား။ ကိုထောက်ခံသူတွေထက် ပို.
Ankh - တန်ဖိုးက
ယနေ့အချိန်တွင်အများအပြားရှေးဟောင်းလက္ခဏာနှင့်သင်္ကေတ၏ပုံစံနှင့်ပင်ရတက်တူးအတွက်ရတနာကိုဝတ်ဆင်။ စစ်မှန်သော, လူတိုင်းမကိုသာအမှတ်အသား၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှဖို့သတိထားရမှာ, သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်သည်။ ဒါကတစ်ဦးအလွန်လူကြိုက်များဇာတ်ကောင်ရဲ့တန်ဖိုးကိုရဲ့ - ။ အီဂျစ် ankh ကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်ကူးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ကြည့် ကို ankh ကဘာလဲ?